Rajoelina Andry Nirina, Filohan’iza sa Filohan’ny inona ? – MyDago.com aime Madagascar
Rajoelina Andry Nirina, Filohan’iza sa Filohan’ny inona ?
Mety hisy hilaza indray hoe : resaka mandany jiro fotsiny izany fanontaniana izany. Rehefa Filoha dia filoha fa aza asiana ady hevitra, aza kianina fa mandrera-tsaina. Fa tsy mety hankarary sofina antsika kosa ve raha PDS no antsoina hoe: “Be-n’ny tanàna” ? Tsy “M’sé le Depioté” ve no iantsoantsika ny olom-boafidy raha solom-bavam-bahoaka izy? Sa antsointsika amin’ny teny hafa? Tsy sahirana ve isika raha misy fifangaroan’andraikitra hita miharihary kanefa odiana tsy fantatra?
Mampanongo tena mihitsy ny fisehoan-javatra ataontsika mianakavy eto ka izany indrindra angamba no tsy mampitovy ny eritreritr’izay rehetra miteny sy miresaka? Mpanao politika sy olon’ny serasera marobe mihitsy ankehitriny no mampisavoritaka endrin-javatra tsy tokony hampisy ady hevitra akory.
Matetika moa ny vahoaka amin’ny ankapobeny dia mihinana am-bolony fotsiny izay hatolotra azy. Na ny lalampanorenan’ny répoblika faha-telo, na ilay hitsivolana 002/2009, na ny Dinan’i Maputo, na ilay hitsivolana 018/2009 dia samy navadibadika sy nodinihina fa tsy misy milaza mihitsy ao, fa ny mpihazona ny fahefana ankehitriny dia Filohan’ny Répoblikan’i Madagasikara.
Ireo lalàna notanisaina ireo dia samy miresaka fa ny fahefana mitondra an’i Madagasikara amin’izao dia fahefana “natsipitsipy” toy ny baolina rugby (hatsipy mihemotra) : Avy nivoaka ny lalampanorenana mahazatra dia lasan’ny Miaramila ,dia nahilika tamin’ny mpiidina an-dalam-be, dia nosamborina tany Maputo, dia avy eo noterena sy notsindrina ao Ambohitsorohitra ao. Manao ny asan’ny Filohan’ny répoblika io olona mpihazona ny fahefana io, mandray didy hitsivolana mandritra ny filan-kevitry ny minisitra (satria tsy misy olom-boafidy eto), mandray masoivoho (raha misy manaiky ho raisiny); filoha ambonin’ny tafika malagasy sns …
Raha izany ary no asa hampanaovina azy moa ve mitovy lenta amin’ny voafidim-bahoaka izy? Naninona izy no noravahana ny mari-boninahitra fara-tampony eto amin’ny firenena? (Anontanio ny eny Ambohidahy). Maninona àry ny mpanao politika sasantasany, ny mpampahalala vaovao isan-karazany (tsy vitsy izy ireo) no manao fanahy iniana miantso io olona io hoe: Filoham-pirenena? Tao amin’ilay dinan’i Maputo dia milaza fa “filohan’ny tetezamita” sy “chef de l’état” no andraikitra amin’adidy tazonin’ilay mpitarika ny fahefam-panjakan’ny tetezamita., ary neken’ireo mpifanaiky sy mpanao sonia tany.
Iny dina iny moa dia efa nolaviny izy tenany ihany. Fa ny tetezamita hampiainana antsika izao dia entin’ny Fahefana Avon’ny Tetezamita (arak’ilay hitsivolana 018/2009 tamin’ny 12 desambra 2009). Tsy misy resaka fanjakana eo, fa fahefana. Ka aza gaga raha telo ihany hatramin’izao no masoivoho niadaladala niantso azy hoe S.E.M (Son Excellence Monsieur…).
Amin’izao fotoana mbola mampiolana antsika eto izao izany , dia tsy manana Filoham-pirenena ny Malagasy , tsy misy filoham-panjakana ihany koa (?), tsy manana olom-boafidy mpanao lalàna,mangadihady ny any Tsimbazaza any, mpiandry tanàna sy fampandalovana taratasy no ao Ambohidahy, tsy manana fanjakana hankatoavin’ny firenena any ivelany sy ny sehatra iraisam-pirenena.
Ny misy eto dia “filohan’ny Fahefana Avo”, “Praiminisitra lehiben’ny governemanta” mpampihodina ny asa tokony hataon’ny tena fanjakana, mpikambana ao amin’ny fahefana avo, izay miasa etsy Anosy (saingy tsy fantatra na manao ny asan’ny mpanolo-tsaina izy ireo na mpamorona lalàna, na inona?). Sao dia mba izany zavatra bitika toa azo hamaivanina izany ary no anisan’ny tokony ho vahana fa tsy hitsambikina hilaza fa “nationale” kanefa tsy mahadinga-tatatra ?
i Andry Nirina RAJOELINA no fositra !
Ultimatum contre Andry Rajoelina?
Auteur Ony RambeloPublié le 31 mai 2011 31 mai 2011 Catégories Malagasy, Politique
13 pensées sur “Rajoelina Andry Nirina, Filohan’iza sa Filohan’ny inona ?”
31 mai 2011 à 17 h 34 min
Misaotra anao naka fotoana, nanoratra sy nanazàva ; ary nampahafantatra ny tena ao anatin’ny mokon-dohan’ny olona ! Tsy mahagaga amiko izany raha mitarazoka toy izao ny krizy !
« Filohan’ny Fahefana Avo » ? Nankaiza ny TETEZAMITA ?
Ary raha atao hoe « Fahefana Avon’ny Tetezamita » satria nosoratanao ery ambony koa izany, iza no nanaiky an’izany na dia navoakany aza izany hitsivolana 018/2009 izany ?
Ny vahoaka malagasy iray manontolo ve sa ireo mpisolelaka ny foza ihany !
Amin’ny legalista io dia mbola potsista atramin’izao !! Naman’ny mpangalatr’akoho na dahalo satria Mpangalatra. Nohy izany, tsy izaho na izahay legalista mihintsy aloha no hiantso an’io domelina io hoe prezidà !!! Ireo mpiaradia aminy dia mitovy saranga aminy ihany koa !!
Fitondrana nangalarina io, ary tsy taitra ny vahoaka izany, satria betsaka ny olona mampiditra ao an-dohany fa fitondrana azo ekena io, satria efa mahazo mamoaka hitsivolana !!
Tsia tompoko !! Ny mpangalatra dia mijanona ho mpangalatra, ery rehefa miresaka amin’ny vazaha ny tenako, dia tsy manonina an’io hoe Président de la Haute Autorité de la Transition izany mihintsy, fa hoe Rajoelina le putschiste ( avec un petit p ), na le putschiste fotsiny !!
Tsy dia mahafehy tsara ny teny malagasy ny tenako na dia mihezaka ihany aza ny tenako, fa izay afaka mandika ny hoe « autorité de fait » dia mba omeo kely eto azafady !!
31 mai 2011 à 17 h 51 min
Andrana ny ahy fa mety tsy ho izany no tena dikany :
Autorité de fait = « Fitondràna tsy lany era » fa an-katerena ! « Didiko fehy lehibe » angamba no marina kokoa ???!
Mba anjaranao no manome ny hevitrao ary !
31 mai 2011 à 17 h 57 min
Be resaka aho azafady an !!!!? Tsara angamba aloha ny manavaka ny hoe Parlementaire sy Deputé . Sa tsia ?
Ny parlement dia organe (Wikipedia) ===> parlementaire : olona ao anatin’ny Parlement
Ny Député kosa di
31 mai 2011 à 18 h 00 min
Ouuuuuuh ! Ny Député kosa dia olona ! raha mijery ny wikipedia dia hazava kokoa angamba ny iantsoana azy marina !
Député dia Representant ao amin’ny Parlement !
Mety ho afaka mifidy ny iantsoana ireo amin’izay angamba ? amin’ny fomba mazava !
– Ny « autorité de fait » dia « fanjakàna misy », izany hoe tsy voatery ho ara-dalàna fa noho ny anton-javatra nitranga, ohatra : fanonganam-panjakàna, dia nisy fanjakàna najoron’ireo izay nahatonga ilay trangan-javatra (fait).
– ny « Parlement » dia « Antenimiera » ka mizara roa, ny iray dia « Antenimieran-doholona » (Senat ou Chambre Haute) ary ny iray dia « Antenimieram-pirenena » (Assemblée Nationale ou Chambre Basse) izay ivondronan’ireo « Mpisolombavam-bahoaka » (Député).
Izay no mba farim-pahaizako ka tsy fantatro raha marina io !
1 juin 2011 à 4 h 19 min
tsara mihitsy angambana raha tsy mampiasa intsony io voambolana « fanjakana » io isika fa izay no nanimba zavatra teto.
ny hoe « fanjakana » anie dia fomba fitondrana toy ny « repoblika »
aiza moa no tsy hiseho tsy maty manota na ny irakiraka eny amin’ny minitera aza: mpiasa-mpanjakana izy koa tsy azo kasiana !!!
Hampiaso NY VOAMNOLANA MARINA dia ataovy hoe « FITONDRANA » fa tsy hoe « FANJAKANA »
Hampiova zavatra be io !!
Misaotra an’i Ony manitsy ny fomba fijery. Raha ny marina dia tsy misy na inona na inona ataon’io fitondrana io. Raha mba misy zavatra mandeha dia ny mpiasa izay efa niasa hatramin’izay no mampandeha ny raharaham-pirenena. Mba alaivo an-tsary ange inona no mba ataon’io tgv io ao Ambohitsirohotra ao? Mitango lalitra sy mifoka môly no ataon’io ao. Ary izany tokoa no izy satria mora amin’ny fahefana tsy manao na inona na inona ny manome jour férié ny zoma joli ho avy izao.
Fitondran’ny mpangalatra, mpandroba, mpandainga ,Mpamita-bahoaka,mpanambaka ny bado izay ratsy rehetra misy eto ambonin’ny tany izany no mitondra ny firenena … indrisy ry gasy mahantra… Fantatro fa manam-pahaizana ianareo matoa afaka mamakafaka toy ireo eo ambony ireo fa ny gasy Bado sy mahantra dia taritaritin’ny FAT n’alika etsy eroa dia miandry hatrany ny vary mora tsena mora … Ny be bokotra sy kintana efa jamba toy irony jamban’ny taolana irony ; dia ahoana isik’ty???sa Fanjakana sa Fitondrana inn no misy eto rizareo ôôô
1 juin 2011 à 9 h 12 min
Hitsahatra ve izany ny tolona ? Satria amin’izao ankatokin’ny FIHAONANA FARANY any Gaborone izao, dia namoaka didy indray ny Faty fa hoe tsy mahazo « amnistie » ny Président Ravalomanana !!
Namaoka didy ny « mpitondra fanjakàna », kOa dia izay izany, vita kabary !!!!! Inona intsony moa izany no hitolomana rahatoa ka izay DIDY SY FANAMPAHIN-KEVITRA REHETRA AVAOKANY, DIA TSY MAINTSY EKENA ????
1 juin 2011 à 14 h 31 min
Raha ny marina dia manao sangy ratsy io fitondrana io, sangy ratsy izay hampidi-doza azy. Fantany ange fa MAPUTO izay tsy nasiany vidiny no hasongadina any Gaborone ary tsy handeha any izany io bandy io indrindra fa tsy maintsy hifanena amin’ny Président Ravalomanana. Ingahy kadhaffi dadabeny izao tsy mety hiala eo amin’ny fitondrana fa manao didoha fotsiny amin’izao. Ny OTAN anefa dia nanambara fa dia mitohy izany ny daroka. Ny zavatra tsapako dia tsy ho tody hatramin’ny faran’ny taona ity fitondran’i tgv ity ary handalo fitsarana tsy hisy hindra fo izay mpikambana amin’io fitondrana io.
1 juin 2011 à 14 h 53 min
Misoatra anao Mbly !
Mazava tsara io !ary hanaraka anao tsy miambahamba aho amin’ny Fanazavanao !
Ny parlementaire na ireo membre ao aminy moa izany inona ? Mba mpisolom-bavam-bahoaka ihany sa tsia ? Toa mifangarao amin’ny Député izy izany ?
Hitantsika tsara ary fa raha mpianatra vao Hanala Bacc, angamba tsy dia hahatratra loatra io fanamarinana io, amin’ny teny malagasy !
Nefa moa dia resaka nivoaka tamin’ni HoAiza ihany izay fa ny tolona no tena vontoatin-dresaka !
Momba ity Didy navoakan’ny Mpanao fanjakàna Domelina ity anie raha izaho efa tsy mitombona mihitsy e ! Satria efa Illegal-Illegitime izy ireo (sa izy?). Efa lany andro ihany koa ! Ka raha ny tena marina dia tsy misy Didy nivoaka akory, satria isan’ny foana sy tsy manan-kery ny zavatra REHETRA ataony.
Fa dia izy Mibodo na midong eo amin’ny toeran’ny Mpitondra fotsiny no ahafahany mamoka tsy ara-dalàna Didy Jadona toy iza o !
Izao korontana rehetra miseho mikasika ity any Gaborone ity izao anie, dia ny Mpanajanatany no tena fosotra e !
1 juin 2011 à 16 h 46 min
Ireo milaza azy ho mpitondra ireo no tena atao hoe jiolahim-boto sy jiolahim-bavy !
Faikany manao lohan’na mpanamôly na tanora na antitra, fisainana mirefarefa amin’ny tany !!
Maty antoka ny ray aman-dreniny raha mba nandefa azy hianatra ! Ny loza dia ny sasany mba hoe nampianatra teny Ankatso, kanefa ity zavatra nampianarina toa tsy narahina akory, na Lalàna nampianarin’ny sasany aza, dia izy ihany no nanitsakitsak’azy !!
Mby aiza ny hoavin’ny taranaka, fara amandimby amin’izany toe-tsaina tsy mendrika izany ?
Hevitra tapaka tany Maputo ny CT sy CST, fa tokony niarahana nitantana rahatoa ka tafatsangana soa aman-tsara ny Transition ! Indrisy fa nivadika tamin’izay zavatra efa nekeny indray ilay domelina sy lohan’angidina !!
Nolaviny ihany koa ny fananganana ny CT sy CST araky ny fifanarahana, fa izay zavatra naha diavolana ny saina ihany no nataony ! Nalaina daholo ho solon’ny solombavam-bahoaka, ireto dahalo sy mpangalatra ary mpisoloky, ireo nanampy azy tamin’io fanonganam-panjakàna io !
Koa vahoaka iza no nifidy an’ireo, manan-kery marina ve izay zavatra na didy na lalàna avoakan’izy ireo ?
Nandaniana volam-panjakàna ny fanaovana referendum, referendum izay efa fantatra fa tsy ho eken’ny C Internationale, fa dia natao ihany satria misy vola be azo hihinanana ! Raha niresaka momban’ny fifidianana tany Côte-d’Ivoire ilay mpanao gazety iray izay, dia hoy izy : Ny SAGEM ihany no nahavoa, satria 300 millions d’euros no lany, ary anisan’ny fifidianana nandaniana vola be indrindra !
Firy millions izany no tokony hikarakarana izay fifidianana ho atao ao Madagasikara ?
Hitan-tsika amin’izany ny antony hifikirany amin’io toerana nangalarina io !!
Ny vahoaka etsy vokisana amin’ity vary masiso natao hoe « vary mora » ; vary mora nafarana avy any ivelany satria misy bizina ihany koa io !
Izay rehetra mandeha na atao dia bizina ! Zaraina fanamiana vaovao sy fitaovana vaovao ny police sy gny gendarmes sy miaramila satria tsy mitafy sy tsy manam-pitaovana angamba ! Ny zanaky ny vahoaka tsy afa-mianatra intsony anefa noho ny faha-lafosan’ny fiainana !
Namboarina indray ity Lapan’ny tanàna, sady notapahana ny Avenue mba tsara ao amin’ny tanàna ! Asa, samy mamon-drongony daholo angamba ireo nanampa-kevitra, fa dia urbaniste avy aiza no nanome hevitra tao ? Amin’izay tsy misy maha maika azy ! Firy taona io no teo, tsy nisy nimenomenona ! Naroso ihany satria mbola vola be koa no azo tamin’izany ! Mba iza anefa izao no miasa ao ? Toa hoe tsy azo hidirana akory aza ?
Ny fananam-panjakà toy ny JIRAMA, Air Mad dia potehana, satria tsy maintsy tandrovana ny « sakafon’izay nanampy » rehetra !
Tsy ary ho voatanisa eto daholo, fa dia faly hono ny vahoaka satria efa nanafarana mpihira malaza avy any an-dafy, ka tsy tokony hidrinkina !!
Koa hatr’aiza ny fieretam-pery ny vahoaka malagasy, sa samy mandeha samy mitady, fa tsy ambonin-javatra izany hoe raharaham-pirenena izany ???
Satria lany sy tsy misy intsony ve ny « baraka », ka na ny mandeha tsy manao akanjo na pataloha, sy kilaoty sy silipo eny an-dalambe aza tsy maninona intsony ?
Ho faranako, fa mampivonto fo fotsiny !! Mankaloiloy !
2 juin 2011 à 9 h 14 min
Ary ho ataon-dradomelina tokoa tsy ho ela ny mandeha tsy manao akanjo na pataloha, sy kilaoty sy silipo eny an-dalambe.
Précédent Article précédent : Paraît-il que la constitution des foza est très exigeante
Suivant Article suivant : Pouvoir et sa prévoyance, S’enfoncer davantage à cause d’un entêtement